အရာရာဆုံးရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓါတ်မဆုံးရှုံးသရွေ့ သင်မလဲသေးပါဘူး
လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ အားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီလား။ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရာမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ ၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ မျှော်လင့်ချက် ၊ အလုပ် အရာရာတိုင်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအောက်မှာ အရာအားလုံးမျက်လှည့်ပြလိုက်သလိုမျိုး ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ လက်လွှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေ ကြုံဖူးပါသလား။ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးဖို့တောင် အားအင်တွေ မရှိတော့တာမျိုး။ လောကကြီးထဲကနေ ထွက်ပြေးသွားချင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေ ကြုံနေပြီလား။
တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါ တိုင်ပင်ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ်လဲကျတဲ့အခါ ထူပေးဖို့ မိတ်ဆွေတွေ မရှိတော့တဲ့အခါ တမ်းတမနေပါနဲ့။ ကိုယ်မွေးကတည်းက ကိုယ့်ဘေးနားမှာ လဲကျတဲ့အချိန်ထိ ရှိနေပေးတဲ့ ငါရှိနေသေးတာပဲ။ ငါရှိနေသေးသရွေ့ ငါ လဲမကျစေရဘူး။ ငါရှိနေသေးသရွေ့ ငါ့ကို ဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်လို့မရစေရဘူး။ ငါသည်သာ ငါ့ဘဝရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်။
RECOMMENDED FOR YOU - ရပါတယ်
လူတိုင်းတော့ ဆုံးရှုံးမှူဆိုတာကြီးကို ကြုံရမှာပဲ။ ကိုယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာပေါ်မူတည်ပြီးသာ တန်ဖိုးကွာသွား မှာပါ။ တချို့က မိဘ ဆုံးရှုံးရတယ် ၊တချို့က ခြေလက်တွေ ဆုံးရှုံးတယ်၊ တချို့က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ဆုံးရှုံးတယ်၊ တချို့ ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတယ်၊ တချို့က ချစ်သူဆုံးရှုံးတယ်။ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မဆုံးရှုံးသွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူဟာ အရာအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူပါပဲ။ ကိုယ်အသက်ရှင်သန်နေ သေးတယ်ဆိုတာကိုက ကိုယ့်အတွက် ဆုလာဒ်တစ်ခုပဲလေ။ လူတိုင်းရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံရလို့ ဘာမှမလုပ်ချင်တာလား ။ စိတ်မပူပါနဲ့ သင်ဘာမှမလုပ်ရင်တောင် ဘာမှမလုပ်လို့ဆိုပြီး ဝေဖန်မယ့် သူတွေက ရှိနေအုံးမှာပါ။ ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ သေလူပဲရှိပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှင်သန်နေသေးသရွေ့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကို ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။ သူများတွေကို လက်ညှိုးလိုက်ထိုးမနေပါနဲ့။ ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းမကြီးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ လျှောက်လှမ်းရမှာပါ. သင့်အစား ဘယ်သူမှ လျှောက်လှမ်း ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲကတော့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်တဲ့အထိ တိုက်နေရအုံးမှာပဲ။ တိုက်ပွဲတိုင်း မရှုံးနိုင်သလို တိုက်ပွဲတိုင်း မနိုင်နိုင်ပါဘူး။ လောကရဲ့ သဘောတရားကိုက ဒီလိုပဲလေ။ ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့ မရတဲ့ ကံကြမ္မာကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး ကိုယ့်ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲ အတွက် အတော်ဆုံးစစ်သည်တော်တွေ ဖြစ်ပါစေဗျာ။
လောကကွီးတဈခုလုံးမှာ ကိုယျပိုငျဆိုငျထားသမြှ အားလုံးဆုံးရှုံးသှားပွီလား။ ပိုငျဆိုငျမှုဆိုရာမှာ ပစ်စညျးဥစ်စာမှ မဟုတျပါဘူး။ မိဘ ၊ မိတျဆှေ၊ အပေါငျးအသငျး၊ မြှျောလငျ့ခကျြ ၊ အလုပျ အရာရာတိုငျး ပါဝငျနပေါတယျ။
ကံကွမ်မာအလှညျ့အပွောငျးတဈခုအောကျမှာ အရာအားလုံးမကျြလှညျ့ပွလိုကျသလိုမြိုး ပကျြစီးဆုံးရှုံးပွီး ကိုယျပိုငျဆိုငျထားသမြှ လကျလှတျခံလိုကျရတဲ့အခြိနျမြိုးတှေ ကွုံဖူးပါသလား။ ရှတေ့ဈလှမျးတိုးဖို့တောငျ အားအငျတှေ မရှိတော့တာမြိုး။ လောကကွီးထဲကနေ ထှကျပွေးသှားခငျြတဲ့အခြိနျမြိုးတှေ ကွုံနပွေီလား။
တဈခုခုလုပျတဲ့အခါ တိုငျပငျဖို့ သူငယျခငျြးတှေ ကိုယျလဲကတြဲ့အခါ ထူပေးဖို့ မိတျဆှတှေေ မရှိတော့တဲ့အခါ တမျးတမနပေါနဲ့။ ကိုယျမှေးကတညျးက ကိုယျ့ဘေးနားမှာ လဲကတြဲ့အခြိနျထိ ရှိနပေေးတဲ့ ငါရှိနသေေးတာပဲ။ ငါရှိနသေေးသရှေ့ ငါ လဲမကစြရေဘူး။ ငါရှိနသေေးသရှေ့ ငါ့ကို ဘယျသူမှတိုကျခိုကျလို့မရစရေဘူး။ ငါသညျသာ ငါ့ဘဝရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ။
RECOMMENDED FOR YOU - ရပါတယျ
လူတိုငျးတော့ ဆုံးရှုံးမှူဆိုတာကွီးကို ကွုံရမှာပဲ။ ကိုယျဆုံးရှုံးသှားတဲ့အရာပျေါမူတညျပွီးသာ တနျဖိုးကှာသှား မှာပါ။ တခြို့က မိဘ ဆုံးရှုံးရတယျ ၊တခြို့က ခွလေကျတှေ ဆုံးရှုံးတယျ၊ တခြို့က မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ ဆုံးရှုံးတယျ၊ တခြို့ ပစ်စညျးဥစ်စာဆုံးရှုံးတယျ၊ တခြို့က ခဈြသူဆုံးရှုံးတယျ။ အမြိုးမြိုးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မဆုံးရှုံးသှားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ကျိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့သူဟာ အရာအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသှားတဲ့သူပါပဲ။ ကိုယျအသကျရှငျသနျနေ သေးတယျဆိုတာကိုက ကိုယျ့အတှကျ ဆုလာဒျတဈခုပဲလေ။ လူတိုငျးရဲ့ ဝဖေနျမှုကို ခံရလို့ ဘာမှမလုပျခငျြတာလား ။ စိတျမပူပါနဲ့ သငျဘာမှမလုပျရငျတောငျ ဘာမှမလုပျလို့ဆိုပွီး ဝဖေနျမယျ့ သူတှကေ ရှိနအေုံးမှာပါ။ ဘာမှမလုပျတဲ့သူတှဆေိုလို့ သလေူပဲရှိပါတယျ။
ကိုယျကိုယျတိုငျရှငျသနျနသေေးသရှေ့ ကိုယျ့ဘဝရဲ့အနာဂတျကို ကိုယျဖနျတီးနိုငျပါသေးတယျ။ ကိုယျဖနျတီးထားတဲ့ အရာတှကေို ခံစားနိုငျခှငျ့ရှိပါသေးတယျ။ သူမြားတှကေို လကျညှိုးလိုကျထိုးမနပေါနဲ့။ ကိုယျလြှောကျတဲ့လမျးမကွီးကို ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ လြှောကျလှမျးရမှာပါ. သငျ့အစား ဘယျသူမှ လြှောကျလှမျး ပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဘဝဆိုတဲ့တိုကျပှဲကတော့ ကိုယျ့ဘဝရဲ့နောကျဆုံးခြိနျရောကျတဲ့အထိ တိုကျနရေအုံးမှာပဲ။ တိုကျပှဲတိုငျး မရှုံးနိုငျသလို တိုကျပှဲတိုငျး မနိုငျနိုငျပါဘူး။ လောကရဲ့ သဘောတရားကိုက ဒီလိုပဲလေ။ ကိုယျထိနျးခြုပျလို့ မရတဲ့ ကံကွမ်မာကို အပွဈတငျနမေယျ့အစား ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအကောငျးဆုံးပွငျဆငျပွီး ကိုယျ့ဘဝရဲ့တိုကျပှဲ အတှကျ အတျောဆုံးစဈသညျတျောတှေ ဖွဈပါစဗြော။
အင်္ဂလိပ်စာမှာ reading and vocabulary skill တွေကို တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ
Kaplan Myanmar University College မှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ MBA ဘွဲ့အတွက် သင်ယူနိုင်တော့မည်
Pyinnyar Myo Set